ပြည့်စုံ စက်မှုဇုန်နှင့် အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
01-687944, 09-73103030, 095180001, 0943153917,,095405027,09402686489,09-264779900 Website
စက်မှုဇုန် လုံးချင်းအိမ် အငှား ဂိုထောင် အရောင်း လုံးချင်းအိမ် အရောင်း ခြံအရောင်း ကွန်ဒို အရောင်း ကွန်ဒို အငှား
ဗဟန်း ရန်ကင်း တာမွေ စမ်းချောင်း ကြည့်မြင်တိုင် ကမာရွတ် အင်းစိန် လှိုင်သာယာ လှိုင်
About ပြည့်စုံ စက်မှုဇုန်နှင့် အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
''ပြည့်စုံ'' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့၏အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊စက်ရုံ၊ဂိုဒေါင်၊မြေကွက်များ ရောင်း/ဝယ်/ငှားရမ်းမှုများအတွက်အပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့၏အောင်မြင်သော ဘဝနှင့်အတူအဆင်ပြေမှု အရသာ ကို ထာဝရ ခံစားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့၏ ယုံကြည်မှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခွန်အားပါ......
We, Pyae Sone
House Agent Provides the best Services for selling , buying and leasing Flats, Houses, Factories. Godowns as well as Vacant Lands.
ပြည့်စုံ စက်မှုဇုန်နှင့် အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် -9မိုင်လုံးချင်း
Advertised by ပြည့်စုံ…
ဧရိယာ : 7800 sqft
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	30,000 သိန်း
Advertiser : ပြည့်စုံ စက်မှုဇုန်နှင့် အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
01-687944, 09-73103030, 095180001, 0943153917,
ငှားရန် - န၀ဒေးအိမ်ရာတွင်မြေကွက်ငှားရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3 သိန်း
ငှားရန် - န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် လုံးချင်း(၂)ထပ်ငှားရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5 သိန်း
ငှားရန် - န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ပါကေးခင်းထားသော လုံးချင်း(၂)ထပ်ငှားရန်ရှိသည်
န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ပါကေးခင်းထားသော လုံးချင်း(၂)ထပ်ငှားရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5.50 သိန်း
ရောင်းရန် - န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် လုံးချင်း(၂)ထပ်ငှားရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	6.50 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	7 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	9 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	9.50 သိန်း
Asking Price : 9.50 သိန်း
ရောင်းရန် - န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် လုံးချင်း(၂)ထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,000 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,200 သိန်း
ရောင်းရန် - န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် လုံးချင်း(၁)ထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ထောင့်ကွက်ပါ လုံးချင်း(၂)ထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်
န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ထောင့်ကွက်ပါ လုံးချင်း(၂)ထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,950 သိန်း
Asking Price : 2,950 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,200 သိန်း
လှည်းကူး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လှည်းကူး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,500 သိန်း
လှည်းကူး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,500 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,800 သိန်း
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	4,300 သိန်း
Asking Price : 4,300 သိန်း
ရောင်းရန် - နဝေဒေးဥယျာဉ်အိမ်ယာတွင် လုံးချင်း(2)ထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	4,500 သိန်း
ရောင်းရန် - န၀ဒေးအိမ်ရာတွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ငှားရန် - ဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒိုတွင် ပရိဘောဂအပြည်စုံပါသောကွန်ဒိုငှားရန်၇ှိသည်